ताप्लेजुङ – ताप्लेजुङस्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथीभराको दर्शनमा आएका एक बालकको लेक लागेर मृत्यु भएको छ । प्रहरीका अनुसार पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिका–८ याङ्नामका दुई वर्षीय बालक उत्सव लिम्बूको मृत्यु भएको हो
काठमाडौँ । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक हालसम्मकै सर्वाधिक उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक १५.७२ अङ्कले बढेर दुई हजार ६७४.४६ मा पुगेको छ
सहारा नेपाल साकोस नेपालकै सबैभन्दा धेरै सदस्य रहेको उत्कृष्ट सहकारी हो । पूर्व नेपालबाट सहकारीको अभियानलाई देशभर फैल्याउन सफल सहारा आम नागरिकको सहारा बनेको छ । स्थापनाको २५ वर्ष पुरा
४० वर्षमा आम व्यापारीलाई निराश बनाइएको छ, अब नयाँ अनुहार व्यवसायीको चहाना पनि हो : अर्जुन मैनाली
विर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचन आइतवार हुँदैछ । चुनावी प्रचार प्रसारको समय सकिए पनि उम्मेद्वारहरु शनिवार साँझसम्म भोट माग्न व्यस्त भए । चुनावी मैदानमा लोकतान्त्रिक व्यवसायिक र संयुक्त व्यवसायिक दुई
उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रमा सुवास भट्टराईको नाम अपरिचित छैन । उद्योग–व्यवसायजन्य संघ–संस्थामा कुशल नेतृत्वकर्ताको रुपमा पनि सुवास भट्टराई सुपरिचित नाम हो । विर्तामोड वा झापा मात्र होइन राष्ट्रिय रुपमै निजी क्षेत्रमा सुवासको
भारतको पश्चिम बङ्गालसँग सीमा जोडिएको इलामको सन्दकपुर गाउँपालिका पर्यटकीय क्षेत्रका प्रचुर सम्भावना बोकेका ठाउँ हो । विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत माइपोखरी, पूर्वी पहाडकै उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य सन्दकपुरसहित छिन्टापु, मेचीकै अग्लो टोड्के
चितवन। कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सङ्क्रमणको त्रासले गरिएको बन्दाबन्दीका कारण धराशयी अवस्थामा पुगेको नेपालको कुखुरापालन क्षेत्रमा केही दिनयता सुधारको लक्षण देखापरेको छ । चल्लाको बिक्री बढेको छ, मासु र अण्डाको खपत मात्र
तीर्थ सिग्देल (लेखक) लकडाउनको सदुपयोग मानिसहरुले कसरी गरिरहेका होलान् ? या लकडाउन छ भन्दै सुर्ताएर बसिरहका होलान् कि ? हुनतः लकडाउन भनेपछि घरबाहिर निस्कन नमिल्ने भएपछि धेरै ठुला काम गर्न
‘झापामै छिटोभन्दा छिटो कोभिड हस्पिटल बनाइनु पर्छ’
झापाको कचनकबल गाउँपालिकामा १०० जना कोरोना सङ्क्रमित भइसकेका छन् । प्रदेशकै ‘कोरोना हटस्पट’ बनिसकेको अवस्थामा गाउँपालिका अध्यक्ष अन्जार आलमले कोरोनालाई क्वारेन्टाइनमै सीमित राखेर समुदायमा फैलिन नदिन गरिरहेको कुशल नेतृत्वको अहिले